Onye na-enye onyinye pope onyinye Msgr. Krajewski na-agwa anyị ka anyị cheta ndị ogbenye n'oge ịgba ọgwụ mgbochi | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Onye na-akwado pope onyinye Msgr. Krajewski na-agwa anyị ka anyị cheta ndị ogbenye n'oge ịgba ọgwụ mgbochi
Mgbe ọ gbakere n'onwe ya na COVID-19, onye isi poopu maka ọrụ ebere na-agba ndị mmadụ ume ka ha ghara ichefu ndị ogbenye na ndị na-enweghị ebe obibi ka mmemme ịgba ọgwụ mgbochi na-agbasa gburugburu ụwa.
Vatican nyere ndị 19 na-enweghị ebe obibi ọgwụ mgbochi mbụ nke COVID-25 na Wenesde, ebe 25 ndị ​​ọzọ ga-anata ya na Tọzdee.
E mere atụmatụ a site na Kadịnal Polish bụ Konrad Krajewski, onye na-enyere ndị obodo aka.
Ọrụ Krajewski bụ imere ebere na aha popu, ọkachasị ndị Rome, mana ọrụ a abawanyela, ọkachasị n'oge ọrịa coronavirus, ịgụnye ọ bụghị naanị obodo ndị ọzọ nke Italiantali, kamakwa ụfọdụ n'ime mba ndị kacha daa ogbenye n'ụwa.
N'oge nsogbu ahụ, ọ kesara ọtụtụ puku akụrụngwa nchekwa na ọtụtụ ndị na-agba ume na Syria, Venezuela na Brazil.
Eziokwu ahụ ma ọ dịkarịa ala ndị na-enweghị ebe obibi 50 ga-anata ọgwụ mgbochi ahụ "pụtara na ihe ọ bụla ga-ekwe omume n'ụwa a," ka Krajewski kwuru.
Onye prelate ahụ kwukwara na enwere usoro iji hụ na otu ndị ahụ natara ọgwụ nke abụọ.
Ọ sịrị, "Ndị ogbenye na-agba ọgwụ mgbochi dịka ọ bụla ndị ọzọ na-arụ ọrụ na Vatican," ka o kwuru, na-ekwu na ihe ruru ọkara ndị ọrụ Vatican anatala ọgwụ mgbochi ugbu a. "Ikekwe nke a ga-agba ndị ọzọ ume ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ogbenye ha, ndị bi n'okporo ámá, ebe ha onwe ha sokwa n'obodo anyị."
Otu a nke ndị enweghị Vatican gbara ọgwụ mgbochi bụ ndị ndị Nwanna Nwanyị Mercy na-elekọta oge niile, ndị na-elekọta ụlọ na Vatican, yana ndị bi na Palazzo Migliore, ebe mgbaba nke Vatican mepere n'afọ gara aga na nso St. Oghere.
Ndị ụkọchukwu ahụ kwuru na idebe ndị na-enweghị ebe obibi na ndepụta nke ndị Vatican ga-agba ọgwụ mgbochi adịghị mfe, maka ebumnuche iwu. Ma, Krajewski kwuru, sị, “anyị ga-abụrịrị ihe atụ nke ịhụnanya. Iwu bụ ihe na-enyere aka, mana onye ndu anyị bụ Oziọma “.
Kadịnal Polish bụ otu n'ime ọtụtụ ndị ọrụ Vatican dị elu nwalere ule COVID-19 kemgbe mbido ọrịa a. N'okwu ya, ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ekeresimesi n'ihi nsogbu sitere na oyi baa nke COVID-19 kpatara, mana ewepụtara ya na Jenụwarị 1.
Onye ụkọchukwu ahụ kwuru na ọ na-adị ya mma karịa, n'agbanyeghị na ọ ka na-ata ahụhụ obere nsonaazụ site na nje ahụ, dị ka ike ọgwụgwụ n'oge ehihie. Agbanyeghị, ọ kwetara na "ịnweta ụlọ nnabata a na-ekpo ọkụ dịka m mere mgbe m lọtara n'ụlọ ọgwụ, ọ bara uru ịnweta nje a."
Kadinal ahụ kwuru, sị: “Ndị na-enweghị ebe obibi na ndị ogbenye anabatawo m nke ndị ezinụlọ na-adịghị anabatakebe.
Ndị ogbenye na ndị na-enweghị ebe obibi na-akpọtụrụ ọfịs Krajewski mgbe niile - onyinye ebere nke na-enye nri dị ọkụ, mmiri ọkụ, uwe dị ọcha na ebe obibi mgbe ọ ga - ekwe omume - ọ bụghị naanị na Vatican na - enweta ọgwụ mgbochi ahụ, kamakwa enyere ha ohere ịnwale. Maka coronavirus atọ ugboro n'izu.
Mgbe mmadụ nwalere ihe dị mma, ọfịs na-arụ spindle na-akpọpụ ha iche n'ụlọ nke Vatican nwere
N'ajụjụ ọnụ emere na Jenụwarị 10, Pope Francis kwuru maka ị nweta ọgwụ mgbochi COVID-19 n'izu na-abịa ma gbaa ndị ọzọ ume ka ha mee otu ihe ahụ.
"Ekwenyere m na na ụkpụrụ omume onye ọ bụla kwesịrị ị theụ ọgwụ mgbochi ahụ," ka Pope kwuru na N'ajụjụ ọnụ nke ọwa TV Canale 5. "Ọ bụ ụkpụrụ omume n'ihi na ị na-eji ahụ ike gị, ndụ gị egwu egwu, mana ị na-egwu ndụ ndị ọzọ".
N'ọnwa Disemba, ọ gwara mba ka ha mee ọgwụ mgbochi "maka mmadụ niile" n'oge ozi ekeresimesi ya.
"Ana m arịọ ndị isi nke steeti niile, ụlọ ọrụ, otu mba dị iche iche ... ka ha kwalite nkwado na ọ bụghị asọmpi yana chọọ azịza maka mmadụ niile, ọgwụ mgbochi maka mmadụ niile, ọkachasị maka ndị kachasị nwee nsogbu na ndị nọ ná mkpa na mpaghara ụwa niile" ka popu kwuru n’oge ọdịnala obodo ya bụ Urbi et Orbi (obodo na ụwa) n’ụbọchị ekeresimesi.
Nakwa na Disemba, ka ọtụtụ ndị bishọp Katọlik na-enye ozi na-emegiderịta onwe ya banyere omume nke ọgwụ mgbochi COVID-19, na-eburu n'uche na ụfọdụ n'ime ha jiri sel sel si n'ụmụ ebu n'afọ tụbara maka nyocha na nyocha ha, Vatican bipụtara akwụkwọ na-akpọ ya "omume anabata. "
Vatican kwubiri na "ọ bụ ihe omume na-anabata ịnabata ọgwụ mgbochi COVID-19 nke jiri ahịrị sel nke ụmụaka ebu n'afọ atọrọ" n'usoro nyocha na mmepụta mgbe ọgwụ mgbochi "enweghị ụkpụrụ" adịghị n'ihu ọha.
Mana ọ kwusiri ike na "ihe iwu kwadoro" iji ọgwụ mgbochi ndị a "emeghị na ọ gaghị n'ụzọ ọ bụla na-egosi na enwere nkwado mmụọ nke iji usoro sel sitere na nwa ebu n'afọ na-ete ime".
Na nkọwa ya, Vatican kọwara na ịnweta ọgwụ mgbochi ọrịa nke anaghị eweta nsogbu ịkpa agwa anaghị ekwe omume mgbe niile, n'ihi na enwere mba "ebe anaghị enye ọgwụ mgbochi na-enweghị nsogbu gbasara ụkpụrụ ị nyere ndị dọkịta na ndị ọrịa" ma ọ bụ ebe ọnọdụ nchekwa pụrụ iche ma ọ bụ njem na-ekesa siri ike karị.